ISuperTuxKart 1.3 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo | Ubunlog
Ubumnyama | 28/09/2021 23:46 | software
Kwiintsuku ezithile ezidlulileyo ukukhutshwa kwenguqulelo entsha yeSuperTuxKart 1.3 kwabhengezwa eziza neendaba ezinomdla kakhulu kwaye apho eyona ibaluleke kakhulu kuzo inguqulelo yayo ebonisiweyo yeNintendo switch, ukwaziswa kweenkundla ezintsha nokunye.
Kulungiselelwe abo bangayazi i-Supertuxkart, kufuneka bayazi loo nto lo ngumdlalo wokubaleka osimahla ngeekariti ezininzi kunye neengoma. Ngaphandle koko, iza nabalinganiswa abavela kwiiprojekthi ezahlukeneyo zomthombo ovulekileyo ezibandakanya iingoma ezininzi zomdyarho. Ngaphambili ibingumdlali omnye okanye umdlalo wabadlali abaninzi wasekhaya, kodwa ngale nguqulo intsha izinto ziyatshintsha.
Kukho iintlobo ezininzi zokhuphiswano lwabadlali abaninzi ezikhoyo, ethi zibandakanya imidyarho yesiqhelo, izilingo zexesha, imo yedabi kunye nemowudi entsha yokuFota.
1 Iindaba eziphambili iSuperTuxKart 1.3
2 Uyifaka njani iSuperTuxKart kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Iindaba eziphambili iSuperTuxKart 1.3
Njengoko besitshilo kwintengiso yokuqalaIindaba ezimnandi kakhulu yale nguqulo intsha yeSuperTuxKart 1.3 Okokuba umdlalo ubanjelwe imidlalo yeNintendo switch yomdlalo kufakwe i-Homebrew, ke ukuba unokutshintsha kwaye ufuna ukubanakho ukufaka lo mdlalo kwikhonsoli yakho unokulandela imiyalelo yokuba neKhaya lasekhaya Kule khonkco ilandelayo.
Enye into entsha ebonakalayo kule nguqulo intsha yile yongeze amandla okusebenzisa ingxelo yentshukumo yabalawuli ezixhasa lo msebenzi.
Singayifumana loo nto Ii-arenas ezintsha zongeze inkxaso yemeko yokuBanjwa kweFlegi: I-Ancient Colosseum Labyrinth (i-labyrinths emnyama kunye nomoya kwisitayile seColosseum yaseRoma) kunye noMqondiso oMbi (ibuyisela kwakhona iziseko kwenye yeeprojekthi zokukhangela impucuko yasemhlabeni).
Kukwakhankanyiwe kwisibhengezo senguqulelo entsha ukuba Umsebenzi sele wenziwe ukuphucula ii karts ezikhoyo kunye noSara uRacer uthathelwe indawo nguPepper ovela kwiPepper kunye neCarrot comics kwaye imbonakalo yeGnu, uSara iWizard, iAdiumy kunye neEmule karts ziphinde zasebenza.
Ukuhlengahlengiswa kwengoma kwibala lemidlalo laseLas Dunas.
E-Hacienda, e-Old Mine, e-Ravenbridge Mansion, nase-Shifting Sands, umda uye wanyuswa ukuvumela i-laps kwimeko ye-SUV encinci.
Imowudi "yokuSombulula isisombululo" yongezwe kuseto lwemizobo, ekuvumela ukuba wandise ukusebenza ngokunciphisa isisombululo sokwenyani somfanekiso obonisiweyo.
Imenyu ibonelela ngescreen esitsha kunye netafile yeerekhodi.
Utshintshele ekusebenziseni iphakheji yemodeli yeBlender 3 ye-2.8D ukwenza iitrekhi, iimephu, kunye neenkundla. Izikripthi ze-STK zifakwe kwizibuko ukusukela kuguqulelo 2.7.
Ujongano lomsebenzisi lubonelela ngokukwazi ukucofa kwi-URL yokubhaliweyo.
Gqibela ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngayo Malunga nolu hlobo lutsha lomdlalo, ungazijonga iinkcukacha kwisibhengezo esisemthethweni. Ikhonkco yile.
Uyifaka njani iSuperTuxKart kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Kananjalo, iSuperTuxKart ithandwa kakhulu kwaye ifunyanwa kuninzi losasazo lweLinux, kodwa njengoko usazi ukuba uhlaziyo alusetyenziswanga kwangoko kwindawo yokugcina izinto, ukuze ukonwabele olu hlobo lutsha Kuya kufuneka ukongeza indawo yokugcina umdlalo.
Oku kungongezwa kulo naluphi na uhambiso olusekwe kubuntu nokuba yiLinux Mint, Kubuntu, Zorin OS, njl.
Ukuyongeza, vula nje itheminali (Ctrl + Alt + T) kwaye uchwetheze lo myalelo ulandelayo:
Hlaziya lonke uluhlu lwethu lwezinto zokugcina kunye:
Kwaye ekugqibeleni qhubekeka kufakelo lweSupertuxkart kwinkqubo yethu:
Enye indlela ukuze ukwazi ukufaka lo mdlalo ubalaseleyo kwinkqubo yakho, ngoncedo lweephakeji zeplaspak kwaye eyona nto ifunekayo kukuba unike amandla inkxaso yolu hlobo lwepakeji kwindlela yakho.
Ukufakela usebenzisa le ndlela, vula nje itheminali kwaye uchwetheze lo myalelo ulandelayo:
Okokugqibela, ukuba awufumani sindululi kwimenyu yesicelo sakho, ungaqhuba umdlalo ofakwe yiplppak ngokuchwetheza lo myalelo ulandelayo kwi-terminal:
Kwaye ukulungele ukonwabela!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » ISuperTuxKart 1.3 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo